QEYBDIID oo shaaciyey sir ku saabsan qorshe ay PUNTLAND damacsan tahay |
QEYBDIID oo shaaciyey sir ku saabsan qorshe ay PUNTLAND damacsan tahay
Super Kamagra without prescription, dapoxetine without prescription. Madaxweynaha Galmudug Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid), ayaa sheegay in Sababaha uu Maamulka Puntland Colaadda uga hurinayo Gobolka Mudug uu yahay qorshe ah sidii uu u fashilmi lahaa Shirka Cadaado.
“Puntland waxay u abuurayso Xaaladda Dagaal si uu u baaqdo Shirka Cadaado ee Maamulka loogu samaynayo Galgaduud iyo Mudug, sababta aan taasi u leeyahay ayaa ah waxay xirtay Garoonka si gaar ah loo leeyahay iyadoo ku andacoonaysa in Wafdi Federaalka ka tiran uu imaanayo Gaalkacyo,” ayuu yiri Cabdi Qeybdiid.
Wuxuu sheegay in Garoonka C/llaahi Yuusf uu yahay mid Qaranka uu leeyahay, islamarkaana uu diiday Maamulka Garoowe in Garoonka uu noqdo mid u dhaxeeya shacabka Soomaaliyeed, isagoo dhanka kale tilmaamay in Maamulkiisa xayiraadda ka qaaday Garoonkaasi markii Codsi uga yimid DFS.
“Puntland waxay islahaysiisay Garoonka C/llaahu Yuusuf oo Qaranka uu leeyahay, iyadoo ku andacoonaysaa wax aan jirin oo ah in Wafdigayga uu la socday Xubno kamid ah Dowladda Federaalka, oo uu C/wali Gaas sheegayo inuu xariirka u jaray,” ayuu raaciyay C/qeybdiid.
Dhan kale, Madaxweynaha Galmudug ayaa ugu baaqay Dowladda Dhexe inay Wafdi Xaqiiqo raadis ah u dirto Gaalkacyo, si ay u baaraan dhanka Colaadda iyo Daandaansiga wado.
Madaxweyne Cabdiqeybdiid wuxuu ka codsaday Bulshada Calaamka iyo Dowladda Soomaaliya inay soo diraan Wafdi kala saara, Yaa Garoonada Xaq u leh, yaa awood u leh inay joojiyan Safarada Diyaaradaha?